Vaovao - Ny firoboroboan'ny paompin-drano Aquarium sy ny paompin-drano amin'ny masoandro
Raha ny momba ny orinasa YUANHUA, ny departemantan'ny R&D dia mamokatra vokatra vaovao foana, izay mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa samihafa amin'ny tsena anatiny sy ivelany.
Gaga izahay fa voakasiky ny virosy satro-boninahitra vaovao, matanjaka ny indostrian'ny loharano anaty rano sy ny fangatahan'ny tsenan'ny masoandro amin'ity taona ity, ary teny an-dàlana ihany koa dia nitombo ihany koa ny paompin-drano aquarium sy paompin-drano amin'ny masoandro.
Voakasiky ny valanaretina koa ny paompin-drano. Nihena ny vokatry ny firenena mpamokatra varahina lehibe eran-tany, fa nitombo kosa ny tinady varahina any Shina. Ny tariby varahina no akora fototra amin'ny paompin-drano, izay miteraka fiakarana amin'ny vidin'ny famokarana indostrian'ny paompin-drano.
Ny tsy fahampian'ny angovo sy ny fahalotoan'ny tontolo iainana no nanjary olana lehibe tokony hivaha amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina ankehitriny. Remote
Ny olan'ny fiompiana sy ny rano fisotro any amin'ny distrika dia matetika voafehin'ny fetran'ny faritra - raha jerena ireo olana etsy ambony dia mipoitra ny paompin-drano photovoltaic araka ny fotoana ilaina.
Amin'ity taratasy ity, ny fitsipika fototra sy ny firafitry ny rafitra paompin-drano photovoltaic dia fintinina, ary ny fandrosoana sy ny toe-pikarohana momba ny rafitra paompin-drano photovoltaic no resahina, ity gazety ity dia mifanakalo hevitra sy mamakafaka ny fitarihana fikarohana manaraka momba ny paompin-drano photovoltaic ity taratasy ity dia manadihady ny azo atao. ary tombony ara-tsosialy amin'ny paompin-drano photovoltaic, antenaina ny fahatsinjovana ny rafitra paompin-drano photovoltaic.
Ny rafitra paompin-drano photovoltaic an'ny masoandro dia misy modely bateria, tarika fanaraha-maso tariby, motera, paompy, fantsom-pandehanana ary valva. Ny fitsipika ifotoran'ny rafitra paompin-drano fotovoltaika dia ny fampiasana ny sela solar hanovana ny angovo avy amin'ny herin'ny herinaratra ary avy eo handroaka ny motera handroaka paompin-drano photovoltaic amin'ny alàlan'ny mpanara-maso. Ny rafitra paompin-drano Photovoltaic dia azo ampiasaina betsaka amin'ny rano ho an'ny olombelona sy ny biby fiompy any amin'ny faritra tsy misy famatsiana herinaratra, fanondrahana fambolena ary teboka miparitaka be toy ny nosy sisin-tany sy ny mpiambina. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, miaraka amin'ny fitomboan'ny hamafin'ny "olan'ny sakafo" sy "olan'ny angovo" manerantany, dia nantsoina tsikelikely ho vokatra fampiroboroboana indostrialy mahomby indrindra hamahana ny olan'ny tany voavoly mahomby, manatsara ny famokarana ary manolo ny angovo fôsily amin'ny madio angovo Izy io dia maodely ara-toekarena vaovao ho an'ny fampiroboroboana indostrialy nentim-paharazana toy ny fiarovana ny rano amin'ny fambolena, fifehezana ny tany efitra, fampiasana rano an-trano ary fizotran-dranomasina an-tanàn-dehibe. Ny paompin-drano Photovoltaic dia mampiasa ny angovo maharitra avy amin'ny masoandro. Miasa amin'ny fiposahan'ny masoandro izy ary mijanona amin'ny filentehan'ny masoandro. Tsy mila fanaraha-mason'ny mpiasa izany. Tsy mila menaka diesel sy tariby mandeha amin'ny herinaratra izany. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanondrahana mitete, fanondrahana famafazana, fanondrahana infiltration ary toerana fanondrahana hafa. Izy io dia afaka mamonjy rano sy mamonjy angovo, ary mampihena be ny vidin'ny fampiasam-bola amin'ny angovo angovo. Tsy misy tabataba, tsy misy fandotoana tontolo iainana, tsy misy fanjifana angovo mahazatra, rafitra mahaleo tena azo itokisana sy avo azo itokisana. Izy io dia angovo vaovao sy vokatra fampiharana teknolojia vaovao misy ny "olana ara-tsakafo" sy "olan'ny angovo" vahaolana amin'ny rafitra feno. Nandritra ny fotoana elaela dia nisy haintany kely